Wararka - Kordhinta kharashyada iyo faa iidada aan ku filneyn, qiimaha korantada garaafka ayaa wali la filayaa inuu kordho.
Kordhinta kharashyada iyo faa iidada aan ku filnayn, qiimaha korantada garaafka ayaa wali la filayaa inay kordhaan.
Dulmarka suuqa: Qiimaha korantada koronto garaafka ayaa toddobaadkan xasilloon. Toddobaadkan, sicirka hoose ee baaruudda batroolka, walxaha kore ee ceyriinka korantada garaafka, ayaa joojiyay hoos u dhaca oo xasilloon. Saamaynta xun ee dusha alaabta ceyriinka ee koronto garaafyada ayaa daciiftay, iyo sugitaanka-iyo-aragtida suuqa korantada garaafka waxyar baa fududaatay. Cadaadiska sicirka sare ee coke coke iyo dhuxusha dhuxusha, taas oo ah alaabada ceyriinka ee koronto-garaafyada, inta badan shirkadaha korantada garaafka caadiga ah ayaa joojiyay oraahdooda. Intaa waxaa dheer, birta korantada garaafka ee toddobaadkan birta foornada korontada ayaa wali sii wadaysa heer shaqeynaya oo sarreeya, korantada garaafkuna waxay u baahan tahay oo keliya inay xasilloon tahay. Inta badan shirkadaha koronto-wadaagga guud ee garaafyada ayaa sidoo kale sheegay in shixnadaha shirkaddu ay deggan yihiin. Waa la arki karaa in garabka koronto-doonka ee dhinaca dalabku uu wali jiro.
Sahay: Suuqa korantada ee loo yaqaan 'graphite electrode' ayaa toddobaadkan si adag u xirmay. Toddobaadkan, helitaanka koronto-wadayaasha awoodda-yar-yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee garaafyada korantada ku leh suuqa korantada garaafka ayaa sii waday inay ahaato mid adag. Sababta ugu weyn ayaa ah in shirkadaha koronto-wadaagga garaafyada caadiga ah ay soo saaraan koronto badan oo awood sare leh iyo cabbir ballaaran. Kororooyinka korantada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi waxay ku xisaabtamaan qayb yar oo wax soo saar ah, iyo isticmaalka dalabaadka hoose awgood, liiska suuqyada lama heli karo. Kordhinta, keenitaanka koronto-yar yar iyo dhexdhexaad dhexdhexaad garaadku wali wuu adag yahay.
Dhinac dalab: Garabka dalabka korantada ee korantada ayaa habeeyay waxqabad guud oo wanaagsan isbuucaan. Toddobaadkan, heerka hawlgalka ee dhirta birta foornada birta ee Shiinaha ayaa weli ku jira heer aad u sarreeya. Iyada oo taageero laga helayo dalabka adag, dareenka ku saabsan iibsashada korantada garaafka ayaa aad u fiicnaa. Intaas waxaa sii dheer, sida ku xusan jawaab celinta shirkadaha koronto garaafka, inkasta oo xamuulka xamuulka ee maraakiibta dhoofintu ay weli ku sugan yihiin heer aad u dhow dhawaanahan, sahayda adag ee maraakiibta dhoofinta ayaa fududaatay, iyo waxqabadka guud ee dhoofinta koronto garaafka ayaa soo fiicnaanayay.
Xaga kharashka: Qiimaha korantada garaafyada ayaa muujiyay isbuucaan kororka isbuucaan. Qiimaha kokeer-baaruudda hoose ayaa joojiyay inuu dhaco oo xasillo toddobaadkan, iyo saameynta taban ee dusha sare ee walxaha ceyriinka korantada garaafku way daciiftay; sicirka coke coke-ka ayaa wali sareeya todobaadkan, qiimaha dhuxusha ayaa sii waday inuu kordho, iyo qiimaha elektaroonikada garaafka ayaa wali sii kordhayay.
Dhanka macaashka: Faa'iidada guud ee suuqa koronto-garaafka garaafka wali kuma filna toddobaadkan. Qiimaha suuqa koronto garaafka ayaa si isdaba joog ah u soconayay dhawaanahan, kororka isbadalka ku yimidna wuxuu wali culeys saarayaa farqiga faa iidada suuqa koronto garaafka.
Xaga kaydka: Asal ahaan ma jiro uruurinta alaabada xad dhaafka ah ee suuqa koronto garaafka todobaadkan. Toddobaadkan, shirkadaha koronto-yaqaannada garaafka badankood waxay leeyihiin wax-soo-saar xasiloon, dalabka hoose ee korantada garaafyaduna waa mid xasilloon, mana jiraan wax ku soo kordha suuqa. Qaar ka mid ah shirkadaha koronto-dhaliyaha garaafyada caadiga ah waxay muujiyeen inay heysan doonaan qeyb ka mid ah alaabada wareegga caadiga ah, qaar ka mid ah shirkadaha korantada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ahna waxay muujiyeen in shirkaddu asal ahaan lahayn wax alaabo ah.
Saadaasha Muuqaalka: Qiimaha suuqa koronto garaafka ayaa wali sare usii kacaya todobaadkan, waxaana hoos u degay qiimaha coke-ga-hooseeya ee baatroolka, qiimaha korantada taakulaynta korantadu way sii kordheysaa. Marka la eego gobolka in faa iidada guud ee suuqa korantada garaafku wali ku filnayn, qiimaha suuqa korantada korantada garaafka ayaa wali leh suurtogalnimada riixitaanka, waxaana la filayaa inuu kordho 1,000 yuan / tan.
Kordhinta kharashyada iyo faa'iidada aan ku filnayn ...